Izilwane kanye nemvelo I-Herbivores
I-Troodon ivame ukufakwa njenge-dinosaur ehlakaniphile kunazo zonke emhlabeni, kodwa lokhu kokubili kugcizelele ukuhlakanipha kwalesi sigqoko futhi kudlala phansi ezinye zayo, izimfanelo ezilinganayo.
I-Troodon Ingabe IsiGreki "Senyolo Lokulimaza"
Umfanekiso kaJoseph Leidy wamazinyo kaTroodon (Wikimedia Commons).
Igama elithi Troodon (elibizwa ngokuthi i-TRUE-oh-don) livela kuzinyo elilodwa elitholakale ngo-1856 yi-naturalist odumile waseMelika uJoseph Leidy (owayecabanga ukuthi ubhekene nesilonda esincane kunokuba i-dinosaur). Kwakungakaze kube sekuqaleni kwawo-1930 ukuthi izingcezu ezihlakazekile zesandla sikaTroodon, izinyawo nomsila zatholakala ezindaweni ezahlukene eNyakatho Melika, futhi ngisho nangaleso sikhathi, lezi zinsalela zalimala zinikezwe uhlobo olungalungile.
UTroodon wayenombono omkhulu kunabo bonke abaDinosaurs
Isici esiqakatheke kakhulu seTroodon kwakuyibuchopho obukhulu obungavamile, obukhulu kakhulu, ngokulingana nawo wonke umzimba wayo wamaphilenti angama-75, kunomqondo wobuchopho obunama-theropods angalingani. Ngokwesilinganiso esithile, uTroodon wayenezikhathi eziningana zamanye ama-dinosaurs, okwenza kube yi-Albert Einstein weqiniso weCretaceous period. (Akumelwe sithathwe, noma kunjalo; njenge-brainy njengoba kunjalo, uTroodon wayesengumuntu ohlakaniphile njengenkukhu!)
I-Troodon ihlwanyela ku-Colder Climates
Kanye nobuchopho obukhulu, uTroodon wayenamehlo amakhulu kunezinhlobo eziningi ze-theopod dinosaurs, okushiwo ukuthi yayizingela ebusuku noma kwakudingeka ukuba iqoqe kukho konke ukukhanya okukhona kusukela emakhazeni alo, ebumnyama eNyakatho Melika (enye idinosaur eyayilandela le nqubo yokuziphendukela kwemvelo i-ornithopod yase-Australia eyinhloko enkulu yeLeaellynasaura ). Ukucubungula ulwazi olwengeziwe lokubukwa kuhlanganisa ukuthi kube nobuchopho obukhulu, okusiza ukuchaza i-IQ ephakeme kakhulu ye-Troodon.
I-Troodon iqoqe amaqabunga ama-16 kuya ku-24 amaqanda ngesikhathi
Amaqanda eTroodon (Wikimedia Commons).
I-Troodon idume ngokuba omunye wama-dinosaurs ambalwa adlalayo ayenziwa ngemininingwane yokubeletha ngokuningiliziwe. Ukuze ahlulele izizathu zokugcina izidleke ezitholwe yiJack Horner eMontra's Two Formation Formation, amaTroodon abesifazane babeka amaqanda amabili ngosuku ngosuku lwamaviki noma ngaphezulu, okwenza ukuba amaqanda angama-16 kuya kwangu-24 abe nemigqa eyisiyingi. baphunyuke ekudleni abagwayi ngaphambi kokuqothula). Njengezinye izinyoni zanamuhla, kungenzeka ukuthi la maqanda ahlushwa yilo wesilisa wezilwane!
Kwaphela iminyaka eyishumi, iTroodon Yaziwa ngokuthi iStenonychosaurus
Ngo-1932, isazi sezinkanyezi saseMelika uCharles H. Sternberg sakha uhlobo olusha lwe-Stenonychosaurus, olwakuthiwa yi-theopod yase-basal ehlobene eduze neCoelurus. Kungemva kokutholakala kwezinto eziphilayo ezithe xaxa ngo-1969 ukuthi iza paleontologists "zivumelanisa" iStenchochosurus neTroodon, futhi zaqaphela ukuthi uStenonychosaurus / Troodon wasondelene eduze ne-Asian theropod Saurornithoides . Udidekile okwamanje? Ungumuntu onenkampani enhle!
Kuyinto engcolile Zingaki izinhlobo zezinhlobo ze-Troodon ezihlanganisiwe
I-Troodon skull (Wikimedia Commons) encane.
Izitshalo zeTroodon zitholakale emkhatsini weNyakatho Melika, ngasekugcineni kwezindawo ze- Cretaceous ezikude enyakatho njenge-Alaska futhi (kuye ngokuthi uhumusha kanjani ubufakazi) njengaseNew Mexico. Ngesikhathi abahlengikazi be-paleontologists bebhekene nokusabalalisa okunjalo, ngokuvamile bajwayele ukucabangela ukuthi isambulela se-genus ingaba sikhulu kakhulu-okusho ukuthi ezinye izinhlobo ze "Troodon" zingase zithole usuku olunye lukhuphukele emgodini wazo.
Ama-Dinosaurs amaningi athathwa njenge "Troodontids"
I-Borogovia (uJulio Lacerda).
I-troodontidae ngumndeni omkhulu we-North American kanye ne-Asian theropods ehlanganyela ngezici ezithile ezibalulekile (ubungako bobuchopho babo, ukuhlelwa kwamazinyo abo, njll) ne-genus eponymous of the breed, iTroodon. Ezinye ze-troodontids ezaziwa kangcono zihlanganisa iBogogovia (ngokulandela umlobi kaLatland Carroll) noZanabazar (emva komuntu waseMongolia ngokomoya), kanye noMei omncane futhi ongeyinto engavamile, ophinde abe nomunye wamagama amfisha kakhulu e-dinosaur bestiary.
UTroodon wayenombono wezinkinobho
I-Orodromeus ixoshwa yiTroodon (iCoconut Grove Science Museum).
Akukhona kuphela ukuthi amehlo kaTroodon amakhulu kunawo wonke (bheka isilayidi # 4), kodwa abekwe phambili ngaphandle kohlangothi lwalobuso buka-dinosaur-isibonakaliso sokuthi uTroodon wayenombono othuthukile we-binocular inyamazane. (Ngokuphambene nalokho, amehlo ezinhlobonhlobo eziningi eziphilayo azihlezi ezinhlangothini zamakhanda azo, ukuvumelanisa okuvumela ukuba bathole ukuthi kukhona ukufika kwezimoto zomzimba.) Lokhu kubonakala okubheke phambili, ngakho okuyisikhumbuzo sabantu, kungasiza chaza idumela likaTroodon ngokuhlakanipha okukhulu.
I-Troodon Ingase Ijabulele Ukudla Okumnandi
Ngamehlo ayo, ubuchopho, nokubamba izandla, ungase ucabange ukuthi iTroodon yakhiwe kuphela ngokuphila kokudla. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi le dinosaur yayiyi-omnivore enhle, edla imbewu, amantongomane nezithelo kanye nezincelwane ezincelisayo, izinyoni kanye nama-dinosaurs. Ucwaningo oluthile lwamuva lubonisa ukuthi amazinyo kaTroodon ashintshaniswa ukuze afune inyama ethambile, kunokuba abe nemifino enobuthi, ngakho-ke ijaji lisalokhu kudla okukhethwa yi-dinosaur.
I-Troodon Ekugcineni Ingase Yenze Isintu Sokuhlakanipha
Ngo-1982, i-paleontologist waseCanada uDale Russell wacacisa ngalokho okungenzeka kwenzeke uma iTroodon isinde ekupheleni kwe- K / T eminyakeni eyizigidi ezingu-65 edlule. Emlandweni wakhe ongeyena kakhulu "counterfactual", i-Troodon yaqala ukuba yi-reptile ehlakaniphile kakhulu, enezimbongolo ezimbili, enezikhali ezinkulu, izithupha eziphikisana kancane nezinyathelo ezintathu esandleni ngasinye-futhi yabheka futhi yazenza njengomuntu wesimanje. (Abanye abantu bathatha le mbono kancane kancane, bathi abantu "like" baphinde bahambe phakathi kwethu namuhla!)
Izithombe ze-Prosauropod Dinosaur namaphrofayela
I-Hadrosaurus, i-Dinosaur yokuqala eyaziwa nge-Duck-Billed Dinosaur
Therizinosaurs - I-Weirdest Dinosaurs
Ankylosaurs - The Dinooredurs Armored
Ama-Headlines e-Best Weiner
Ukuchitshiyelwa kwe-10: Umbhalo, iziqalo, kanye nencazelo
Isiphi Isonto LamaPresbyterian Ngokuqhathanisa Ubungqingili?
Isampula Sample in Sociology Research
Amavoti aseVirginia Woolf
Imithombo Yemithombo Ephezulu Ye-Tree Online
Amathiphu angu-8 wokuthatha amanothi kusuka ekufundeni kwakho
Ubudlelwano be-United States neRussia
Impi Yezwe II: iTirpitz
Amaqiniso Nezibalo Ezithakazelisayo Ngomuntu waseMelika waseMelika
6 Iziteshi ezihamba phambili zokufunda
UPetru Ulahla Ukwazi UJesu - Isifinyezo Sezindaba ZeBhayibheli
Ivesi leBhayibheli Ngokuziqhenya
Izinhlobo zoMculo oMculo
Iyini ikhaya langokwezifiso? I-Architecture Indlela Yakho
Hlanganisa i- "Inner Smile"
I-Space Table Space: Ukukopela Amakamelo Asemincane
Gcwalisa Isigatshana ku-Grammar
I-Dierks Bentley Biography
Izenzo ezintathu ezibucayi zobandlululo ngokumelene no-Obama
IsiTatimende seNkampantolo yeSikoleni Esiqedile Iziqu Kusuka KuProfesa
Abalaleli beVangeli likaMarku